Isigcawu se-Endgame esisusiwe ebesifisa ukubona ukuphunyuka - BGR - Tamban RELAY
Accueil » UKUZIJABULISA Isimo se-endgame esisusiwe ebesifisa ukubona ukuphunyuka - BGR
AbakwaDisney bamangaza abalandeli ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngokuveza lokho Ama-Avengers: I-Endgame izotholakala kwinsizakalo yayo yokusakaza ngosuku lokwethulwa kunokuba kamuva kosuku. Futhi njengoba manje i-Disney + yethulwe ngokusemthethweni, abalandeli bangabuka bobabili i-movie futhi bajabulele ezinye izigcawu ezisusiwe, kufaka phakathi eyodwa enezithombe ezingabonakali esingakwazi ukulinda ukuyibuka.
Amanye amahemuhemu futhi Imibono yabalandeli eyandulele ukushicilelwa kokuqala kwe Endgame wathi uTony Stark uzohlangana nenguqulo endala yendodana noma yendodakazi yakhe lapho ehamba ngesikhathi. Besazi kahle ngaphambi kokuphela kwefilimu Endgame ukuthi okuwukuphela kwendlela ama-Avenger angalungisa ngayo isimo kungaba ukuthembela ekuhambeni kwesikhathi. Besingenalo ulwazi ngohlobo lokuhamba kwesikhathi olungasetshenziswa ukwenza umsebenzi, futhi Endgame iveze uhlobo lolo hambo oluhluke ngokuphelele kulelo ebesilindele. Kodwa-ke, la mahlebezi kanye nemibono yabalandeli iphume nomqondo wokuthi uTony ubona inzalo yakhe ngokuzayo.
Ngokweminye imibiko, kungenzeka ukuthi uKatherine Langford udlala uhlobo lwendodakazi kaTony futhi kuvela ukuthi empeleni uMarvel wadubula izigcawu nefilimu yakhe, kodwa wagcina ngokubanquma. UTony uhlangana nenguqulo endala kaMorgan lesi sigameko ebesifisa ukusibona, ikakhulukazi uma sizigxila kulokho okwenzeka ngaphakathi Infinity War lapho uThanos ehlwitha iminwe yakhe. UThanos uthole uGamora osemncane ngemuva kokudutshulwa, futhi abaningi bazibuza ukuthi kungani uTony engazange abe nakho okufanayo.
Njengoba ubona ku-skrini ngezansi, kuthunyelwe ku-Twitter ( nge MCU Cosmic ), Ukuhlangana kukaTony noMorgan bekuzobukeka okuningi ngalesi sikhathi phakathi kukaThanos noGamora osemusha:
Abaqondisi u-Anthony noJoe Russo bathi kwenzeka le ndawo esusiwe UTony esiteshini saseWay futhi kukhona amazwana kwezinye iziqeshana ezisusiwe esezatholakala kubasebenzisi bakwa-Disney +. Esinye isigameko sikhombisa ukuhlangana kukaPepper uPeter Parker okokuqala, okuhlangenwe nakho esikuzwe kamuva nje:
Siphinde saba nethuba lokubuka ezinye izigcawu zemijondolo engakaze ihlanganiswe nefilimu. UTony uqabula uPitrose kulokhu:
Futhi endaweni yesehlakalo esuswe ngokuphelele, uMantis ubuza i-Star-Lord ukuthi ngabe uGamora uyi-zombie ngemuva kokumbona enkundleni yezempi:
Nayi ividiyo yesehlakalo esisusiwe, esingasuswa maduze ukuze ubheke ngokushesha:
Umthombo Wezithombe: I-Marvel Studios
Uhlu oluhlaba umxhwele lwemibukiso ye-639 nama-movie ongalalela njengamanje - BGR
Demi-tour royal: comment le prince Charles s'est rallié à la loi qui lui a permis d'épouser Camilla
Ngesiteleka, "imizwa engemihle idlula eyakhayo" kuxwayisa udokotela uFerreri - VIDEO
ABANTU & LIFESTYLE8,751